नेपालमा कोरोना : कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ? | Kendrabindu Nepal Online News
30975784 960863 7438091 22576830
नेपालमा कोरोना : कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ?
१९ श्रावण २०७७, सोमबार १६:५२
सोमबार नेपालमा ४ सय १८ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का संक्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार भएका ७ हजार ६ सय ३७ पीसीआर परीक्षणमा ४ सय १८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २० हजार ७ सय ५० पुगेको छ ।
सोमबार ३ सय ५८ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । आजसम्म १४ हजार ९ सय ६१ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ८ सय ७५, प्रदेश नम्बर २ मा ३ हजार १ सय ७६, बागमती प्रदेशमा ५ सय ४३ र गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ३ सय ३० जना डिस्चार्ज भएका छन । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ४ हजार ६६, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ७ सय २३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार २ सय ४८ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
सोमबार देशभरीका आइसोलेसनमा ५ हजार ७ सय ३२ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । जसमा प्रदेश नम्बर १ मा २ सय ९०, प्रदेश नम्बर २ मा २ हजार ३ सय ५७, बागमती प्रदेशमा ६ सय ५१ र गण्डकी प्रदेशमा २ सय ७२ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ३ सय १५, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ५ सय ४९ जना रहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार २ सय ९६, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार १ सय ४४, बागमती प्रदेशमा ८ सय २६ र गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ७ सय ९५ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा १ हजार ३ सय ४०, कर्णाली प्रदेशमा ५ सय १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ५ सय ३७ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन । अहिलेसम्म कोरोनाबाट ५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
covid19, कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ?, नेपालमा कोरोना
Prevकाठमाडौं उपत्यकामा आज ५१ जना संक्रमित थपिए
एसिड आक्रमणकारीको सजायँ अवधि बढाउन मागNext
सुदूरपश्चिममा ७६ हजारको कोरोना परीक्षण, ६,५९२ जनामा कोरोना पुष्टि
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन काँग्रेस नेता जोशीको माग
'पर्यटनमा ६० अर्ब बराबरको क्षति' : मन्त्री भट्टराई
सिन्धुपाल्चोकका पहिरो पीडितलाई युवा सङ्घ र सिन्धु वेलफेयर सोसाइटीको राहत सहयोग
बुन्डेसलिगामा डर्टमुन्डको सहज जित
आइपिएलमा चेन्नईको विजयी सुरुवात